Thenga i-Gestodene powder (60282-87-3) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / Gestodene powder (60282-87-3)
Akukho kalo SKU: 60282-87-3. Udidi: AmaHormones aseTyhini
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Gestodene powder (60282-87-3), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Gestodene powder, Igama lomthikazi u-Femoden, i-Femodene, i-Femodette, i-Gynera, i-Harmonet, i-Lindynette, i-Harmonet, i-Lindynette, i-Meinane, i-Millinette, i-Minesse, i-Minulet, i-Mirelle, ne-Triadene kunye nabanye abaninzi.I-Gestodene iyi-progestogen ye-hormonal contraceptive. Imveliso equkethe i-gestoden ibandakanya uMeane, ene-20 mcg ye-ethinylestradiol kunye ne-75 mcg ye-gestodene; kunye neGynera, ene-30 mcg ye-ethinylestradiol kunye ne-75 mcg ye-gestodene.
Gestodene powder ividiyo
Gestodene powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Gestodene powder
I-molecular Formula: C21H26O2
Isisindo somzimba: 310.43
Melt Point: 190-192 ° C
Isitoreji sokugcina: -20 ° C Ifreezer
Umjikelezo weGestodene powder
Amagama eKhemikhali: I-Gestodene powder
Amagama eBrama: i-Femoden, i-Femodene, i-Femodette, i-Gynera, i-Harmonet, i-Lindynette, i-Harmonet, i-Meinane, i-Millinette, i-Minesse, i-Minulet, iMirelle, ne-Triadene kunye nabanye
Ukusetyenziswa kweGestodene powder
I-Gestodene powder iyona progestogen enamandla kakhulu kwaye iphinda ibe ne-androgenic, antimineralocorticoid, kunye ne-glucocorticoid. Ngenxa yomsebenzi wayo weprogestogenic, ine-antigonadotropic kunye neempembelelo ze-antiestrogenic.
Ukufumaneka kwe-Gestodene powder yi-87 ku-100%. Ngokungafani nezinye izizukulwana zesithathu zokuzalwa ezifana ne-desogestrel kunye neyona ndlela, i-Gestodene powder ayikho i-prodrug. I-half-life biological-life is 12 kwiiyure ze-14.
Izibonelelo zokuthatha i-Gestodene powder (i-Femoden) ziquka:
linye yeendlela ezinokuthenjwa ezithembekileyo zokukhulelwa komzimba xa zisetyenziswe ngokuchanekileyo
ngokuqhelekileyo yenza ukuba amaxesha akho ahlale elula, elula kwaye engaphantsi kabuhlungu
kunokukunceda ngempawu zangaphambi kokuya esikhathini.
I-Gestodene powder (i-Femodene) ayiyi kukukhusela kwizifo ezithathelwana ngesondo, njengeClamydia okanye i-HIV. Iikhondom kuphela zinokukunceda ukwenza oku.
I-Femodene imele ithathwe njengenjongo yokukhusela ukukhulelwa.
Iyiphi imilinganiselo ye-Gestodene powder
Thatha i-Gestodene powder kunye ne-ethinylestradiol ngokuchanekileyo njengoko kuchazwe ngugqirha wakho. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho ngokuchanekileyo.
I-Gestodene powder kunye ne-Ethinylestradiol dose ugqirha ugunyazisa uya kusekelwe kwezi zinto zilandelayo (sebenzisa nayiphi na okanye konke okusebenzayo):
ezinye iimeko zonyango onayo
amanye amayeza owathathayo
indlela osabela ngayo kule nyilisi
I-Gestodene powder ne-Ethinylestradiol iyafumaneka kula manqanaba alandelayo:
Desogestrel-ethinyl I-Estradiol 0.15 Mg-0.03 Mg yomlomo
Desogestrel-ethinyl Estradiol Biphasic Oral Tablet
Desogestrel-ethinyl Estradiol Triphasic Oral Tablet
I-drospirenone-ethinyl I-Estradiol 3 Mg-0.02 Mg ye-Oral Tablet
I-drospirenone-ethinyl I-Estradiol 3 Mg-0.03 Mg ye-Oral Tablet
I-drospirenone / i-ethinyl I-Estradiol / levomefolate i-Biphasic 3 Mg-0.02 I-Mg-0.451 i-Mg e-Oral Tablet
I-drospirenone / i-ethinyl I-Estradiol / levomefolate i-Biphasic 3 Mg-0.03 I-Mg-0.451 i-Mg e-Oral Tablet
I-Ethinyl Estradiol 0.02 Mg Oral Tablet
I-Ethinyl Estradiol 0.05 Mg Oral Tablet
I-Ethinyl Estradiol 0.5 Mg Oral Tablet
I-Ethinyl Estradiol Compounding Powder
I-Ethinyl Estradiol-ethynodiol 35 Mcg-1 Mg yomlomo
I-Ethinyl Estradiol-ethynodiol 50 Mcg-1 Mg yomlomo
I-Ethinyl Estradiol-etonogestrel 0.015 Mg-0.120 I-Mg Vaginal Ring
I-Ethinyl I-Estradiol-levonorgestrel I-0.05 Mg-0.25 I-Oral Tablet
I-Ethinyl Estradiol-levonorgestrel I-20 Mcg-100 Mcg yomlomo
I-Ethinyl Estradiol-levonorgestrel I-20 Mcg-90 Mcg yomlomo
I-Ethinyl I-Estradiol-levonorgestrel I-30 Mcg-0.15 Mg yomlomo
I-Ethinyl I-Estradiol-levonorgestrel I-Biphasic eyongezelelweyo ye-Oral Tablet
I-Ethinyl I-Estradiol-levonorgestrel I-Cycle eyongezelelweyo 30 Mcg-0.15 Mg e-Oral Tablet
I-Ethinyl I-Estradiol-levonorgestrel I-Low Rose I-Biphasic Excle Cycle Oral Tablet
I-Ethinyl Estradiol-levonorgestrel I-Quadriphasic Cycle Extended Oral Tablet
I-Ethinyl Estradiol-levonorgestrel I-Tablet ye-Oral Tablet
I-Ethinyl Estradiol-norelgestromin 20 Mcg-150 Mcg / 24 Hr Transdermal Ifilimu, eyandiswa
I-Ethinyl Estradiol-norgestrel I-50 Mcg-0.5 Mg ye-Oral Tablet
Indlela i-Gestodene powder isebenza ngayo
Iipilisi ze-Femodene zihlobo lwe-hormonal contraception eyaziwa ngokuba yi-'pilisi 'okanye idilesi yokudibanisa yomlomo. Iipilisi ze-Femodene ziqulethe izithako ezimbini ezisebenzayo, i-ethinylestradiol kunye ne-Gestodene powder. Ezi ziinguqulelo zentsebenziswano ye-hormone yesini, ngokwemvelo, i-estrogen kunye ne-progesterone. I-Ethinylestradiol inguqu yokwenziwa kwe-estrogen kunye ne-Gestodene powder 'uhlobo lwesithathu' lwendlela yokwenziwa kweprogesterone.
Ukuhlanganiswa kokukhulelwa komlomo njengomsebenzi we-Femodene ngokugqithiseleyo umjikelezo wesiqhelo. Ngomjikelezo oqhelekileyo wokuhamba ukuya kwindoda, ama-hormonal sexually transmitted every month. Amahomoni enza ukuba iqanda likhishwe kumaqanda (ovulation) kwaye ilungiselele ubhedu kwisibeleko ukuze ukhulelwe. Ekupheleni komjikelo ngamnye, ukuba iqanda lingaqhelwanga, ama-hormone awela, okwenza ukuba isibeleko sokubeleka siphala njengenyanga.
Umthamo wemihla ngemihla ethathwa kwipilisi isebenza ikakhulu ngokukhohlisa umzimba wakho ukuba ucinge ukuba i-ovulation sele iyenzeka. Oku kuvimbela iqanda ukuba livuthwe kwaye likhutshwe kwiiyunithi inyanga nganye.
Amahomoni akwandisa ubukhulu besikhokelo semvelo entanyeni yesibeleko, okwenza kube nzima ukuba isidoda siphume sisuke kwisisu kwaye sifinyelele iqanda. Batshintsha kwakhona umgangatho wesibatho sokubeletha (endometrium), okwenza kube lula ukuba iqanda elikhulelweyo litshale khona.
Tshela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe okanye ucwangcise ukuba ukhulelwe.
I-FDA ichaza imichiza esekelwe ukhuseleko lokusetyenziswa ngexesha lokukhulelwa. Iintlobo ezintlanu - A, B, C, D, kunye no-X, zisetyenziselwa ukubeka ingozi enganeni engakazalwa xa iyeza kuthathwa ngexesha lokukhulelwa.
I-Ethinyl Estradiol / i-Gestodene powder iwela kwicandelo X:
Kuye kwaboniswa ukuba abafazi abathabatha i-Ethinyl Estradiol / Gestodene powder ngexesha lokukhulelwa bangaba nabantwana abaneengxaki. Azikho iimeko apho iinzuzo zonyango lomama zigqithise kakhulu ingozi yengozi kumntwana. La mayeza akufanele asebenziswe ngabasetyhini abakhulelweyo.
Gestodene powder Marketing
Ngaba i-Gestodene powder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Iziphumo ezichaphazelekayo zeGestodene powder zingabandakanya:
Intloko, umzimba wt utshintsho, iimeko ezixinezelekileyo / eziguqulwayo, intlungu yesisu okanye isisa, utshintsho kwi-libido. Ukuphazamiseka kwe-GI njengentlungu kunye neentlungu zesisu.
Indlela yokuthenga i-Gestodene powder kwi-AASraw
Estradiol Inanthate powder